Nepal Samaya | यस्ता छन् जेम्स बोन्डका २५ फिल्मका कथा र कमाइ
नेपाल समय | काठमाडौं, मंगलबार, असोज २६, २०७८
सन् १९६२ मा ‘डाक्टर नो’ बाट सुरु भएको जेम्स बन्ड सिनेमा शृंखलाको २५ संस्करण हालै सार्वजनिक भएको छ। कोरोना महामारीले गर्दा ढिलो गरी रिलिज भएको ‘नो टाइम टु डाइ ००७’ ले पनि बन्डको झन्डै साठीवर्षे इतिहास मन पराउनेहरूको संख्यामा कुनै कमी छैन।
जेम्स बन्ड काल्पनिक ब्रिटिस सेक्रेट सर्भिस एजेन्ट हो। ब्रिटिस पत्रकार र लेखक इयान फ्लेमिङले १९५२ मा जेम्स बन्डलाई आफ्नो आख्यानमा उतारे। पचास वर्षको हाराहारीमा सन् १९६४ मा फ्लेमिङको मृत्यु भयो। उनी बितेपछि पनि जेम्स बन्डको आख्यान लेखिई नै रहे र उनको कथामा फिल्म बनिरहे।
अद्भूत बन्दुकबाज बन्ड बिना हतियार पनि शत्रुका निम्ति कालसरह छन्। ऊ यस्तरी दुस्मनसँग लड्छन् कि हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने र पानीमा पौडने उनका लागि बायाँ हातको काम हो। खेलमा पनि उनी दक्ष छन्। उनी गल्फमा पोख्त छन्।
कसैको मृत्यु बन्डका लागि ठूलो कुरो होइन। किनभने उसले त्यस्तै आदेश पाउने गरेको हुन्छ। तर, कसैलाई उद्धार गर्न र प्रहार गर्न बन्ड जहाँ पनि पुग्न सक्छन्। यस्तो छ जेम्स बन्डका २५ फिल्मको कथा–
१. डाक्टर नो (१९६२)
१९६२ मा पहिलो फिल्म जेम्स बन्डलाई लिएर फिल्म ‘डाक्टर नो’ बनेको थियो। इयान प्रडक्सनले बनाएको डाक्टर नोमा सिन कनरीले जेम्स बन्डको भूमिकामा अभिनय गरेका गरेका थिए। यो फिल्म जेम्स बन्ड पात्रमाथि बनेको पहिलो फिल्म इयान फ्लेमिङको उपन्यासमा आधारित थियो। फिल्ममा बन्डलाई हराएको एजेन्ट साथीको बारेमा बुझ्न जमैका पठाइएको हुन्छ।
साथीको खोजीमा निस्केको बन्ड भूमिगत रहेका डाक्टर नो सम्म पुग्छ। डाक्टर नो अमेरिकाको एक स्पेस प्रोग्रामलाई रेडियो बिम हतियारमार्फत नष्ट गर्ने योजनामा हुन्छ। यो फिल्म निकै रुचाइएको थियो। यो फिल्मपछि जेम्स बन्ड शृंखलामा बन्डको शैली सधैंका लागि स्थापित भए।
२. फ्रम रसिया विद लभ (१९६३)
फ्रम रसिया विद लभ जेम्स बन्डको दोस्रो शृंखला थियो। फिल्ममा फेरि पनि सिन कोनरी जेम्स बन्ड बनेका छन्। फिल्म इयान फ्लेमिङको १९५७ मा प्रकाशित उपन्यासमा आधारित छ। फिल्ममा जेम्स बन्ड सोभियत कन्सुलेट क्लर्क टाटिआना रोमानोवालाई तुर्किस्तानबाट भगाउन सहयोग गर्छन्।
अमेरिकामा फिल्म डाक्टर नोको सफलतापछि जेम्स बन्डको दोस्रो भाग बनाउन सहमति भएको थियो। यो फिल्मका लागि बजेट दोब्बर बनाइएको थियो। तुर्किस्तानको दृश्य बकिंघमसायरको पाइनउड स्टुडियो र स्कटल्यान्डमा खिचिएको थियो। फिल्मको समीक्षक र दर्शकले प्रशंसा गरेका थिए।
३. गोल्डफिंगर (१९६४)
जेम्स बन्डको तेस्रो शृंखला गोल्डफिंगरमा पनि सिन कोनरीकै भूमिका छ। यो फिल्म पनि इयान फ्लेमिङको सोही नामको उपन्यासमा आधारित थियो। यस फिल्ममा बन्ड गोल्ड मैग्नेट औरिक गोल्डफिङरद्वारा सुनको तस्करीको जाँच गर्छन्। यसै समय गोल्ड फिंगरले सुन राख्ने ठाउँलाई नै बर्बाद गर्ने योजना पत्ता लगाउँछ।
यो फिल्मको लगानी अघिल्ला दुई सिरिजमा लागेका कुल बजेट बराबर थियो। फिल्म निकै हिट भएको थियो। फिल्ममा प्रयोग गरिएको सामग्री बन्डको पहिचान बन्यो र ती सबै पछिल्ला शृंखलामा प्रयोग गरियो। फिल्मको अर्र्को विशेषता थियो, एकेडमी अवार्ड। फिल्मले दुई सातामा लगानी उठाएको थियो।
४. थन्डरबल (१९६५)
थन्डरबल जेम्स बन्डको चौथो शृंखला थियो। यसमा पनि सिन कोनरी एमआई–६ एजेन्ट बनेका छन्। फिल्म पनि यसै नामको उपन्यासमा आधारित थियो। फिल्ममा बन्ड स्पेक्टरले चोरेको नाटोको दुई एटम बम खोज्ने मिसनमा निस्किएको छ। बमको बदलामा स्पेक्टरले १ सय मिलियन पाउन्ड र हीरा माग्छ। माग पूरा भए अमेरिका र इंगल्यान्डका ठूलो सहरलाई बलले ध्वस्त नपार्ने वचन दिन्छ। यता बन्ड बमको खोजीमा ‘बहामास’ पुग्छ। यो फिल्मको कमाइ अघिल्ला तीन फिल्मभन्दा अत्यधिक भयो। तर समीक्षकले पुरानै कथा दोहोर्‍याएको आरोप लगाए।
५. यु ओन्ली लिभ ट्वाइस (१९६७)
जेम्स बन्डको पाँचौं फिल्म ‘यु ओन्ली लिभ ट्वाइसमा’ मा सिन कोनरी पुनः जेम्स बन्ड बने। तर फिल्म निर्माणका क्रममा यो फिल्म उनको अन्तिम भनिएको थियो। तर चार वर्षपछि पनि उनी जेम्स बन्ड बने।
यो फिल्म भने इयान फ्लेमिङको उपान्यसमा आधारित थिएन। फिल्ममा बन्डलाई अमेरिका र सोभियतको स्पेसक्राफ्ट रहस्यमय ढंगबाट गायब भएपछि जापान पठाइन्छ। सबै देशले एकअर्कालाई शीतयुद्धको दोष लगाइरहेका बेला बन्ड सुटुक्क जापानको एक टापुमा पुग्छन्। जहाँ उनको भेट स्पेक्टरका प्रमुख अर्नेस्ट स्टावरो ब्लोफेल्डसँग हुन्छ।
फिल्मले ठूलो सफलता पायो। समीक्षा पनि सकारात्मक आए। सो फिल्मले १ सय ११ मिलियन डलर कमाएको थियो।
६. अन हर मैजिस्टिज सेक्रेट सर्भिस (१९६९)
जेम्स बन्डको छैटौं शृंखलामा सिन कोनरी देखिएनन्। यो फिल्म पनि इयान फ्लेमिङको उपन्यासमा आधारित थियो। जसमा अभिनेता जर्ज लैजनबायले बन्डको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए। जर्ज एकपटक मात्रै बन्ड बने। फिल्ममा बन्डको सामना ब्लोफोल्डसँग हुन्छ जो विश्वको खाद्य वितरकलाई रोक्न धम्की दिन्छ, तर उसको माग सुनवाइ हुँदैन। ऊ आफ्नो गल्तीका लागि माफी माग्छ। फिल्म राम्रै चल्यो तर यसले बन्डको विशेषता कायम राख्न सकेन भन्ने आरोप लाग्यो। नयाँ बन्डको अभिनयमाथि पनि फरकफरक मत आयो।
७. डायमन्स आर फरएभर (१९७१)
बन्ड शृंखलाको सातौं फिल्म ‘डाइमन्स आर फरएभर’ थियो। फिल्ममा सिन कोनरी बन्ड बनेर फिर्कए। फिल्म पनि इयान फ्लेमिङकै उपन्यासमा आधारित थियो। फिल्ममा बन्ड हीरा तस्करलाई रोक्ने प्रयासमा हुन्छन्। हीरा तस्करीको जालोलाई चुँडाउने उनको ध्येय हुन्छ। बन्डलाई के पनि थाहा हुन्छ भने उसको शत्रु अरनेस्ट स्टार्बो हीराबाट एउटा विशाल लेजर बनाउनेछन्। यो फिल्म पनि निकै रुचाइएको थियो।
८. लिभ एन्ड लेट डाई (१९७३)
‘लिभ एन्ड लेट डाई’ फिल्म जेम्स बन्डको आठौं शृंखला हो। फिल्ममा रोजर मुरले सिन कानेरीलाई प्रतिस्थापन गरे। यद्यपि निर्माता सिन कानेरीलाई नै जेम्स बन्डको भूमिकामा देखाउन चाहन्थे। फिल्म इयान फ्लेमिङकै उपन्यासमै आधारित थियो। फिल्म हार्लेममा रहेको ड्रग माफिया मिस्टर बिगको कथा वरिपरि घुमेको छ। उनको योजना छ, दुई टन हेरोइन निःशुल्क बाँड्ने। यसो गरिएमा अर्को माफिया बाहिर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो माफियालाई सिध्याउने मिसनमा बन्ड गस्याङस्टार र वुडू जादुको चक्करमा फस्न पुग्छ। यद्यपि उसले अन्य तीन ब्रिटिस एजेन्टको मृत्युको रहस्य पनि पर्दाफास गर्छ। फिल्मले पनि बक्स–अफिसमा जादु देखाएको थियो।
९. द म्यान विद गोल्डन गन (१९७४)
‘द म्यान विद द गोल्डन गन’ फिल्म जेम्स बन्डको नवौं शृंखला हो। यसमा रोजर मुर नै बन्डको भूमिकामा थिए। यो फिल्म पनि इयान फ्लेमिङकै उपन्यासमा आधारित छ। साइन्स फिक्सनमार्फत तिलस्मी दुनियामा विचरण गराउने यस फिल्ममा बन्डको आमनेसामने बन्डको सामना निर्मम हत्यारा फ्रांसिस्को कारामंगासँग हुन्छ। म्यान विद द गोल्डन गनका नामले कुख्यात उनी आखिरमा बन्डको सिकार हुन्छन्। बन्ड इतिहासमा सबैभन्दा कम कमाउने फिल्म यही सुनौलो बन्दुक हुन पुग्यो।
१०. स्पाइ हु लब्ड मी (१९७७)
बन्डको दसौं शृंखला ‘स्पाई हु लब्ड मी’ मा पनि रोजर मुर नै बन्डको भूमिकामा दोहोरिए। यस फिल्मको शीर्षक मात्रै फ्लेमिङको उपन्यासमा आधारित थियो, कथा होइन। फिल्ममा बन्डको आमनेसामने पकार्ल स्टोर्मबर्गसँग हुन्छ। जो संसारलाई ध्वस्त बनाएर समुद्रमुनि नयाँ संसार बसाउने योजनामा छन्। फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गरेको थियो।
११. मुनरेकर (१९७९)
जेम्स बन्डको एघारौं शृंखला हो ‘मुनरेकर’ मा रोजर मुर चौथोपटक जेम्स बन्ड एमआई–६, एजेन्ट बनेका थिए। फिल्ममा बन्ड चोरिएको स्पेस सटलको खोज गर्ने काममा खटिएका हुन्छन्। यस क्रममा उनको चिनजान हुगो ड्रक्ससँग हुन्छ। सटल बनाउने कम्पनीका मालिक हुगो स्पेस संसार ध्वस्त पार्ने योजनामा हुन्छन्। यो फिल्म निकै महँगोमा बनेको थियो। फिल्मले राम्रो समीक्षा मात्र पाएन बन्डका अघिल्ला सबै फिल्मको रेकर्ड तोडेको थियो।
१२. फर योअर आइज ओन्ली (१९८१)
बन्डको बाह्रौं शृंखला ‘फर योअर आइज ओन्ली’ मा पनि रोजर मुरले पाँचौंपटक बन्ड बन्ने मौका पाए। फिल्मको पटकथा रिचर्ड मैबुम र माइकल जी विल्सनले लेखेका थिए।
यो शृंखला फ्लेमिङका दुई छोटा कथामा आधारित थियो। फिल्ममा बन्ड मिसाइल कमान्ड सिस्टम पत्ता लगाउने प्रयासमा छ। जसमा ग्रिसका व्यापारीले बन्डलाई फसाएको हुन्छ। फिल्मले १९५ मिलियन डलर कमाएको थियो।
१३. अक्टोपसी (१९८३)
बन्डको तेह्रौं शृंखला ‘अक्टोपस’ मा छैंटौंपटक मुर बन्डको भूमिकामा देखिए। फिल्मको शीर्षक फ्लेमिङको छोटा कथाबाट लिइएको थियो। यस फिल्ममा बन्ड सोभियत जनरलबाट रत्न र प्राचीन वस्तु चोरी गर्न लागेको हुन्छन्। यसैबीच बन्ण्डको भेट अफगान राजकुमार कमाल खान र उनको साथी अक्टोपसीसँग हुन्छ। यो फिल्मको प्रडक्सन इयानको प्रडक्सन हाउसले गरेको थिएन।
१४. ए भ्यु टु किल (१९८५)
बन्डको चौधौं शृंखला ‘ए भ्यु टु किल’ मा सातौंपटक मुरले देखिने सौभाग्य पाए। फिल्मको शीर्षक इयानको छोटो कथा ‘फ्रम ए भ्यु टु किल’ मा आधारित थियो। यसको कथा भने मौलिक थियो। फिल्ममा बन्डले म्याक्स जोरिनलाई क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्यालीलाई नष्ट गर्नेबाट रोक्ने मिसन पाएका हुन्छन्।
१५. लिभिङ डेलाइट्स (१९८७)
‘लिभिङ डेलाइट्स’ बन्डको पन्धौं शृंखला हो। यसमा तिमोथी डाल्टनले जेम्स बन्डको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाए। फिल्मको शीर्षक फ्लेमिङकै छोटा कथामा आधारित थियो। फिल्ममा बन्ड सोभियतबाट निकालिएको जोर्जी कोस्कोबको रक्षा गर्दछ। बन्ड कोस्कोबलाई पछ्याउँदै युरोप, मोरोक्को, अफगानिस्तान यात्रा गर्दछ।
१६. लाइसेन्स टु किल (१९८९)
‘लाइसेन्स टु किल’ फिल्म बन्डको स्रोहौं शृंखला थियो। यसमा फ्लेमिङको शीर्षक थिएन। तर उनको छोटा कथाका केही भाग समावेश गरिएको थियो। फिल्ममा तिमोथी डाल्टन दोस्रोपटक देखिए। फिल्ममा बन्डलाई एमआई–६ को समूहबाट अलग्लै राखेर ड्रग माफियाको पिछा गर्न लगाइन्छ। माफिया सान्चेजले बन्डको साथी फेलिक्स लैटरलाई आक्रमण गर्छ र उसको पत्नीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको हुन्छ। फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गर्‍यो र चर्चिच बन्यो।
१७. गोल्डन आई (१९९५)
बन्डको सत्रौं शृंखला ‘गोल्डन आई’ मा पियर्स ब्रोसनानले बन्डको जिम्मेवारी पाए। यस फिल्ममा फ्लेमिङका कुनै पनि रचना उपयोग गरिएको थिएन। बन्ड यस सिरिजमा एजेन्ट नियन्त्रणबाट बाहिर जान थालेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने मिसनमा हुन्छन्। यो एजेन्ट लन्डनमा एउटा उपग्रहलाई प्रयोग गरेर विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याउने सोचमा हुन्छ। यस फिल्मका बन्ड पियर्स ब्रोसनानलाई अत्यधिक रुचाइयो।
१८. टुमारो नेवर डाइज (१९९७)
बन्डको अठारौं शृखंला ‘टुमारो नेवर डाइज’ मा पियर्स ब्रोसनानले जेम्स बन्डको भूमिकामा अभियन गरे। शक्तिको नसा लागेको एक मिडिया प्रमुखले तेस्रो युद्धको तयारी गर्न लागेको प्रक्रियालाई रोक्ने मिसन हुन्छ बन्डको। यो फिल्म पनि सफल रह्यो।
१९. द वल्र्ड इज नट इनफ (१९९९)
पियर्स ब्रोसनान बन्डको भूमिकामा तेस्रो पटक देखिएको उन्नाइसौं शृंखलामा शीर्षक ‘हर मैजेस्टिज सिक्रेट सर्भिस’ को एक लाइनबाट प्रभावित छ। यसको कथा आतांकवादी रेनार्डद्वारा गरिएका एक अर्बपति सर राबर्ट किङको हत्या वरिपरि घुमेको छ। सर राबर्ट किङकी छोरी इलेक्ट्राको सुरक्षामा खटिएको भूमिका छ बन्डको।
२० डाई अनदर डे (२००२)
जेम्स बन्डको बीसौं शृंखला ‘डाई अनदर डे’ मा बन्डको भूमिकामा पियर्स ब्रोसनान अन्तिम पटक देखिए। फिल्ममा बन्ड खास मिसनका साथ उत्तर कोरिया जान्छन्। जहाँ उनलाई धोका हुन्छ। उत्तर कोरियाली कर्नलको हत्यापछि बन्ड बन्दी बनाइन्छन् यही कथा वरिपरि घुमेको यस फिल्मले पनि राम्रो चर्चा पायो।
२१. क्यासिनो रोयल (२००६)
बन्डको एक्काईसौं शृंखला ‘क्यासिनो रोयल’ फिल्ममा पहिलो पटक देखिए डेनियल क्रेग। यो शृंखला फ्लेमिङको उपन्यासमा आधारित थियो। बन्ड हत्याका लागि लाइसेन्स लिने चरणमा छन्।
मियामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आतंकवादी हमला असफल भएपछि बन्ड वेस्पर लियोन्डको प्रेममा पर्छन्। बन्डको इतिहासमा पहिलोपटक फिल्ममा धेरै परिवर्तन गरिएको यस फिल्ममा बन्ड अधिक प्रभावी देखिए। फिल्ममा डेनियलको भूमिका बेजोड थियो।
२२. क्वाटन्म अफ सोलेस (२००८)
क्वान्टम अफ सोलेस बन्डको बाईसौं शृंखला हो। यसमा पनि डेनियलले दोस्रो पटक बन्डको भूमिकामा अभिनय गरे। पिल्ममा बन्ड आफ्नी प्रेमिका वेस्पर लायन्डको बदला लिन निस्किएको हुन्छ। यही क्रममा बन्ड व्यापारी डामिनक ग्रिनसमक्ष पुग्छन्। जो क्यान्टमको सदस्य हो। उसले बोलिभियामा पानीको वितरण नियन्त्रणको योजना बनाएको हुन्छ। यो फिल्मले पनि राम्रो कमाइ गर्‍यो।
२३. स्काइफल (२०१२)
बन्डको तेईसौं शृंखला ‘स्काइफल’ मा बन्डको भूमिकामा डेनियल नै छन्। उनको यो तेस्रो पटक बन्डको जिम्मेवारी हो। बन्ड एमआइ–६ माथि भएको एक आक्रमणको जाँच गर्दछन्। हमलामा एमआई–६ को पूर्वएजेन्ट राउल सिल्बाको योजना बारे थाहा पाउँछन्। फिल्मले अमेरिका र ब्रिटेनमा खुबै तारिफ बटुल्यो। फिल्मले एक हजार मिलियन डलर कमायो। साथै फिल्मले दुईवटा बाफ्टा, दुई एकेडेमी र दुई ग्रेमी अवार्ड जितेको थियो।
२४. स्पेक्टर (२००५)
जेम्सको चौबीसौं शृंखलाअन्तर्गत ‘स्पेक्टर’ फिल्म बन्यो। जसमा डेनियल नै बन्डको भूमिकामा देखिएका छन्। यस फिल्ममा विश्वव्यापी रुपमा अपराध फैलाइरहेको संस्था स्पेक्टरसँग बन्डले मुठभेड गर्दछन्। स्पेक्टरमा कुनै नयाँपन नभए पनि जेम्स बन्डको ब्रान्डले नै फिल्म चल्यो।
२५.नो टाइम टु डाई (२०२१)
‘नो टाइम टु डाई’ जेम्स बन्डको पच्चीसौं शृंखला हो। यसमा पनि डेनियल क्रेगले जेम्स बन्डको भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। इयान यस फिल्म निर्मातामा दोहोरिएका छन्। लगभग तीन सय मिलियन डलरमा निर्माण भएको यो फिल्म कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो। अन्सर्ट स्टावरो ब्लोफेल्डले कब्जा गरेको पाँच वर्षपछि जेम्सले सक्रिय सेवा छोडिएको कथा भन्छ।
वेब दुनियाँबाट अनुदित
प्रकाशित: October 12, 2021 | 10:49:31 काठमाडौं, मंगलबार, असोज २६, २०७८
विजयादशमीलाई लक्षित गर्दै दुईवटा नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुने भएका छन्।